AirPods 2 vaovao sy tranga vaovao ho an'ny AirPods tany am-boalohany? | Avy amin'ny mac aho
Betsaka ny zavatra nolazaina momba izay mety hahatratra ny tsena finday eto amin'ity tontolon'ny paoma manaikitra ity ao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Ny tsikombakomba farany dia ny hoe Apple dia hanomana headphones vaovao tanteraka ary izy ireo dia ho tampon'ilay salan'isa izay ho ambony noho ny haitao noho ny AirPods 2. Saingy ny zava-drehetra dia fanangonana fampahalalana mbola tsy azo ampifanoherana amin'ny lafiny rehetra izy ireo.
Ny mazava dia ny AirPods 2 vaovao no ho avy, miaraka amin'ny haitao famandrihana tsy misy tariby sy ny mety hampiasana ny "Hey Siri." Hatreto dia mbola tsy nilaza taminay zavatra hafa izay mbola tsy nasianay hevitra tamin'ny lahatsoratra teo aloha izahay.
Ny tena vaovao dia ny tsaho fa 2 AirPods Afaka niaraka niaraka tamin'ny fahafahan'ny tompon'ny AirPod tany am-boalohany afaka mividy ilay raharaha samirery izy ireo ary raha tsy vita izany dia tsy maintsy mamakivaky ilay boaty indray ireo izay nividy AirPod tany am-boalohany mba hahafahany mankafy ny teknolojia famahanana tsy misy tariby. .
Noho io toe-javatra io dia tsy mitovy ny hevitry ny mpandalina ary na dia milaza aza ny sasany fa tsy hamela ireo tompon'ny AirPods tany am-piandohana i Apple amin'ny resaka famahanana finday, ny sasany kosa mihevitra fa ny vaovao dia tokony hikolokolo ny tsena ary izany no dia hahazo tombony bebe kokoa amin'ny paoma, izay tsy mitombina. Fa… Tsy afaka mandresy bebe kokoa ve izy ireo amin'ny fanomezana ireo fahafaha-manao roa?
Na izany aza, kely sisa ny fotoana hijerena ny zavatra hatolotr'i Apple antsika ary amin'ny volana martsa vao ho tonga ny tobin'ny AirPower andrasana izay Apple Watch, iPhone ary AirPods dia azo sarahina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » AirPods 2 vaovao sy tranga vaovao ho an'ny AirPods tany am-boalohany?
Q mivoaka izao !!, te hahita azy ireo ianao !!, fantatrao ve ny daty?, Bebe kokoa na kely !!